Fa Maninona no Tian’ny Olona ny Asam-Panjakana ao Shina? · Global Voices teny Malagasy
Fa Maninona no Tian'ny Olona ny Asam-Panjakana ao Shina?	Voadika ny 17 Desambra 2012 4:01 GMT
Zarao: Nahatratra hatramin'ny 1,12 Tapitrisa ny Sinoa niatrika fanadinana hidirana ho mpiasam-panjakana, ny 25 Novambra 2012 teo, izany hoe nahitana fitomboana 150.000 noho ny tamin'ny taon-dasa, araka ny tatitry ny mpiasan'ny sampandraharaham-panjakana misahana ny asam-panjakana. Mpianatra amin'ny anjerimanontolo ny ankamaroan'ireo mpiadina, mifaninana amin'ny toerana voafetra ho 20.000 amin'ny asam-panjakana izy ireo.
Mihoatra ny 1,5 tapitrisa ireo nisoratra anarana, araka ny tatitry ny South China Morning Post (gazety an-tsoratra) fa – ny be indrindra – ary nihoatra ny 30 in-telopolo avy heny.
Hita tao anatin'izany fanadinana hidirana ho mpiasam-panjakana izany moa ny fitsapa-pahaizana sy ny famelabelaran-kevitra politika an-tsoratra, ary ireo izay afa-panadinana an-tsoratra dia tsy maintsy mandalo adina am-bava henjana dia henjana alohan'ny handraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana
Vondro-mpianatry ny kolejy an'arivony hanao fanadinana ho mpiasam-panjakana any Shina. Pikan-tsarin'ny matoma-baovaon'ny CCTV.
Nanafana ny resaka teo amin’ny mediam-bahoaka sinoa sy ny tontolon’ny bilaogy manadihady ny antony lalina ao ambadik’ity lazany ity ny fahazotoana nanoloana ny fanadinana. Maro no milaza fa mari-pamantaran'ny kolikoly mavesan-danja ao anatin'ny fitantanam-panjakana io, hany ka na mpiasam-panjakana antonony aza dia miaina miadana ny noho ny toerana manokana ahazoana tombontsoa sy fahefana. Ny fanamarihana hafa dia ny fihetsika manifikifi-doha ataon'ny fiaraha-monina manoloana ny orinasa sy fandraisana an-tanana tsy miankina.
Indreto eto ambany eto ny sasany notsongaina tamin’ny Weibo, Twitter-n'ny shinoa [zh]:
Ny kolikolin'ny Rafitra
Henan Univeristy Official Weibo: ‘Niteny indray maka i Putin hoe: “Ny lazan'ny asam-panjakana eo amin’ny firenena iray no manondro ny habetsaky ny kolikoly ao aminy.”
Ma: Halantsika ny mpiasam-panjakana manakolikoly, ka miady fatratra isika ny mangataka ho mpiasam-panjakana;Ompaintsika ny ampihimamba, nefa dia mitady ny fomba rehetra mba hahatafidirana amin'ny orinasam-panjakana tsara karama isika, ihomehezanantsika ny lalàna miafinn'ny fiaraha-monina, fa miezaka mafy isika mitady guanxi [fifandraisana manokana aman'olona]. Mahatezitra ahy izany, tsy hoe satria noho ny fieritreretako izany ho tsy ara-drariny fa satria ratsy toerana isika, tsy hoe mitady ny hanafoanana ny elanelana isika, fa miezaka ny ho tsara toerana ao anaty rafitra tsy marina. Mendrika hoeritreretintsika izany fitiavan-tena izany.
CCTV host Bai Yansong indirectly provokes thoughts:Raha te ho “mpiasam-panjakana” avokoa ny olon-drehetra, mety ho tsy mpiasa angamba izany.”
Ny Tahotra Orinasa Tsy Miankina
Zhushi: Raha misy manantalenta maro ao amin'ny firenena iray no manao izay ezaka rehetra mba hiahazoana asam-panjakana, midika izany fa misy olana lehibe eo amin'ny rafitra. Any amin'ny firenena any ivelany, mazàna ireo manantalenta sokajy voalohany no lasa mpandraharaha, ireo manam-pahaizana sokajy faharoa koamiasa ho an'ny governemanta. Izay no midika fa, na sarotra ny hahazoan'ny orinasa tsy miankina vola na na mora tokoa ny mahazo volaamin'ny maha-mpiasan'ny governemanta.
Qu Jindong: Manondro olana roa izy io: voalohany, lasa mihoatra lavitra ny ambaindainy ny lanja manokan'ny mpiasam-panjakana. Faharoa, tonga teo amin'ny vanim-potoanany ratsy indrindra ny toe-karena Shinoa: ambany ny satan'ny orinasa tsy miankina. Saingy, raha toa latsaka amin'ny fanambaniny indrindra ny zava-misy, dia tsy maintsy ampivoarina ny toe-draharaha. Tokony hahita ny herin'ny toe-karena mirona amin'ny varotra ny tanora misaina, ho tonga amin'ny fetra farany ihany ny andron'ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly.
Malahelo amin'izany toe-draharaha izany ny Filoha tale Jeneralin'ny dhgate.com, Wang Shutong:
Samy mieritreritra na ny tanora na ray aman-dreny fa mitondra fahatsapan-tena ho mampilamintsaina ny rafitra. Efa nilaozana izany fomba fisaina izany taona maro izao, saingy niverina indray ankehitriny. Taona maromaro taty aoriana, dia ho lasa vondron'olona mampalahelo sy mampaonena indrindra ireo tanora mitady filaminan-tsaina mandavataona. Nanontany ny hevitro mahakasika ity lazan'ny asam-panjakana be eto Shina ity moa ny gazety, tsy mpandinika fiaraha-monina aho, fa mpandraharaha sy olona manana traikefa ihany, toa mahatsiaro ho tsy mahaefa sy malahelo aho mandre izany vaovao izany. Raha mitady ny handalo amin'ity “tetezan-kazo tokana” [asam-panjakana] ity ireo tanora ankehitriny, ahoana no fomba hantenaintsika ireo mpanatalenta hirona amin'ny orinasa tsy miankina sy ny fiaingan'ny [toe-karena].
Ilay mpaneho hevitra malaza indrindra Shi Shusi echoed with Wang
Raha tsy manova tanteraka ny fomba fiasan'ny governemanta hiditra amin'ny fanajana ny lalàna isika, dia tsy maintsy hihoa-pahefana noho ny tombotsoany manokana hatrany ireo mpiasam-panjakana, izay antony mivantana mampalaza ny fanadinana. Raha lasa eo am-pelatanan'ny tsy mitady afa-tsy ny tombontsoany manokana ireo toerana saropady eo amin'ny governemanta, dia hanafaingana ny ranomodin'ny fihoara-pahefana fotsiny ihany. Eny hatramin'ireo manam-pahaizana lazaina ho miavaka indrindra ao amin'izao rafitra izao aza dia ho lasa mpisolelaka sy ho mpiasam-panjakana matavy.
Ireo tanora amin'ny firenena tandrefana dia mirohotra any amin'ny orinasa mba hananana harena ara-tsosialy; ny tanoran'ny Shina kosa misisika amin'ny asam-panjakana hanangonan-karena. Raha toa miha-matanjaka ny orinasa any andrefana, lasa manan-karena ny fireneny, eto Shina kosa, miha-manan-karena ny governemanta. Ny firohotana hanao fanadinana no milaza ny maha-ambony ny fitsinjara-karama azon'ny mpiasam-panjakana. Tsy entina hanompoana ny vahoakay, fa ny hanatsara ny toerany sy ny hareny ihany. “Karama volombatolalaka” izany no antony manosika sy hery lehibe ambadik'ireo niatrika fanadinana an-tapitrisany. Ny eritreritry ny olona manondro fa “ny fahefana no zava-dehibe noho ny vola” dia midika olana ara-tsosialy lehibe. Tokony ho mangarahara sy mivelatra amin'ny fifantenana isika ary marina kokoa sy tsy miangatra amin'ny fitsinjara-karama.
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 6 ora izayJapanaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
14 ora izayShinaSiansa-Famisavisana Shinoa Nandrombaka ny Loka Hugo Tantara Foronona Tsara Indrindra
16 ora izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
Fitantanam-pitondranaMediam-bahoakaPolitikaToekarena sy FandraharahànaZavakanto & Kolontsaina